हेर्नुहोस आजको राशिफल : बिहिबार कस्तो रहला तपाईंको भा’ग्यफल ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : बिहिबार कस्तो रहला तपाईंको भा’ग्यफल ?
Khabar house | ११ मंसिर २०७७, बिहीबार ०१:४९ | Comments
ज्योतिषि डिपि भण्डारी : वि.सं.२०७७ साल मंसिर ११ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर २६ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्री शाके १९४२ । कार्तिक शुक्लपक्ष । तिथि–द्वादशी ,अहो रात्र । नक्षत्र–रेवती,४१ घडी ०० पला, बेलुकी १० बजेर ५८ मिनेट उप्रान्त अश्विनी । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ३४ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ०६ मिनेट । दिनमान २६ घडी २० पला । हरिबोधनी एकादशी व्रत ।
मेष : न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर काममा व्यस्त हुनुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । आर्थिक अभावले महत्वपूर्ण कामहरु थाति रहनेछन् । लामो दुरिको वैदेशिक यात्राको तय हुने छ भने विदेशी भूमिमा बसेर श्रम गर्नेहरुले मनग्गे रुपैया पैसा कमाउन सक्नेछन् । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्वन्धी स’मस्या बढ्ने तथा औषधी उपचार खर्च बढेर जानेछ । अन्य काममा सहभागी हुदा पढाइ लेखाइ भने थाती रहनेछ ।
बृष : भौतिक सम्पती तथा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन मार्फत मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ। आयस्रोतका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् भने व्यापार व्यावसायबाट भनेजस्तो नाँफा कमाउन सकिने हुनाले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ। माया प्रे’ममा थप प्रगाडता बढेर जानेछ भने दाम्पत्य जीवन खुरि रहनेछ । पढाइ लखाइमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा गरीएको लगानी फस्टाएर जानेछ ।
मिथुन : कामको सवालमा बिशिष्ट व्याक्ती हरुसँग भेटघाट हुनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने नयाँ व्यावसायमा लगानी गरी आर्थिक रुपमा सुदृड हुन सकिनेछ। नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको गति लो सम्भावना रहेकोछ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवन साथिको समयोगमा राम्रा काम गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ ।
कर्कट : लामो दुरिको शैक्षिक तथा धार्मिक यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । सामाजिक कामहरु गर्न सकिने हुनाले मान मर्यादामा बृद्धि हुनेछ । सामाजिक उत्तर दायित्वमा वहन गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा सोचे जस्तै नाँफा कमाउन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपार्ईँ अरुभन्दा अब्बल हुनुहुनेछ । सरकारी तथा प्रशासनिक काम समयमा सम्पादन गर्न सकिनेछ ।
सिंह : कामगर्ने सवालमा आ’लोचनाको शि’कार हुदा मन खिन्न हुनेछ । व्यापारमा लगानी गरेपनि आम्दानी कम हुने हुनाले दैनिकी प्रभावित हुने । पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछि परिनेछ। स्वास्थ्यमा स’मस्या आई औषधी खर्च बढ्ने योग रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा आउने वि’वादले दैनिक काममा स’मस्या निम्तिनेछ । माया प्रे’ममा एक अर्का विच अ’विश्वास बढ्ने योग रहेकोछ ।
कन्या : व्यापार व्यावसायमा लगानी वढाई आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । भौतिक सम्पती तथा मानव निर्मीत वस्तुहरु प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । लामो समयदेखी भेट नभएका मित्र हरुसँग भेट हुनेछ भने माया प्रे’ममा आत्मि यताको बढोत्तरी हुनेछ भने रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । बिद्यार्थीहरुले अध्ययनमा सफलता पाउनेछन् भने गुरुहरुको राम्रो सहयोग पाइने हुदा गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ ।
तुला : व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी आर्थिक स्थिती उकास्न सकिनेछ । कुनैपनि क्षेत्रमा आउने प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई हराउदै अगाडि बढ्न सकिनेछ भने सत्रुहरुलाई परास्त हुने तथा न्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा आउनेछन् । पढाइमा देखि एको कमजोरि सुधार्दै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । आ’त्मिय मित्र तथा मन मिल्ने साथि भेटिनेछ भने माया प्रे’ममा प्रसस्त समय रमाउन सकिनेछ ।
बृश्चिक : स्वास्थ्य आफ्नै काबुमा रहने हुनाले नयाँ–नयाँ काम गर्ने जोस जागर बढेर आउनेछ । माया प्रे’म गर्नेहरुले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय व्यातित गर्दा खुसी भएको महशुस गर्नेछन। रमाईलो यात्राको तय हुने तथा व्यापार बाट मनग्गे नाँफा कमाउन सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछी पार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिनेछ । आ’कश्मिक धन तथा भौतिक सम्पती लाभ हुनेछ भने शेयर बजारमा गरेको लगानी फ’स्टाएर जानेछ ।
धनु : राजनीति तथा समाजसेवामा जनतासँग सन्तुलित व्यावहार गर्नुहोला आ’लोचनाको शि’कार हुनु पर्नेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गर्ने समय नरहेकोले केहि समय पर्ख र हेरको रणनीति अपानाउनु होला। आमाको तथा आमा सरहका मानिसको स्वास्थ्यमा स’मस्या आई उपचार खर्च बढ्नेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रे’ममा सामान्य मन मु’टाव बढ्नेछ ध्यान दिनुहोला ।
मकर : दाजुभाई तथा छिमेकीसँग मिलेर गरिने पेशा व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ । न्यालयबाट हुने न्या’यिक निर्णयहरु तपाईँ कै पक्षमा आउँनेछन् भने बि’वादलाई हल गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । व्यावसायिक यात्राको तयारि गर्न सकिनेछ भने यात्रा उपलव्धी मुलक नै रहनेछ । पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्ने योग रहेकोछ । माया प्रे’ममा सामिप्यता बढ्ने योग रहेकोछ । शाहसिलो काम गरी नाम तथा दाम दुवै क’माउन सकिनेछ ।
कुम्भ : मिठो मसिनो तथा स्वादिष्ट भोजनका साथ रमाईलो गर्दै दिन कटाउँन सकिनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्ने तथा थोरै बोलेर महत्वपुर्ण कामहरु फत्ते गर्न सकिनेछ । प्रेम प्र’सङमा आफूले मायालुलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाउँदा मन खुसी हुनेछ भने पति प’त्नी विच मायाको डो’रो क’सिलो भएर जानेछ । फेसेनेवल तथा वि’लाशी सामानको व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
मीन : राम्रा तथा सामाजिक काम गरी अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्ने हुँदा आर्थिक रुपमा सबल होईने छ । थोरै स्रोत साधन प्रयोग गरी असिमित आवस्यक्ताहरु पूरा गर्न सकिनेछ । प्रे’म प्रश ङमा रमाउन चाहाने हरुका लागी दिनले साथ दिने हुँदा मिठा मिठा कुरा गरी समय व्यातित गर्न सकिनेछ । पढाइमा प्रगती हुने तथा नतिजा तपार्ईँँ आफ्नै पोल्टोमा पर्नेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस ।
हेर्नुहोस आजको राशिफल : शनिबार कुन-कुन राशिका लागि शुभ ?
हेर्नुहोस आजको राशिफल : शुक्रबार तपाईंको भा’ग्यफल कस्तो रहला ?
राशिफल : आज तपाईंको दिन कस्तो रहला ?
हेर्नुहोस आजको राशिफल : बुधबारको दिन कुन राशिका लागि कति शुभ ?
हेर्नुहोस आजको राशिफल : मंगलबारको दिन कसको लागि कति फ’लदायी ?
हेर्नुहोस आजको राशिफल : सोमबार कुन राशिका लागि कति शुभ ?